Ezigbo Nwa Sera | Titi Koetin
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1928
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1957
ONYE Ọ BỤ Di ya na-enyebu ya nsogbu maka na ọ bụ Onyeàmà Jehova. Ma, o ji akọ nyere di ya aka ya aghọọ Onyeàmà Jehova.—Akụkọ nwa ya nwoke bụ́ Mario Koetin kọrọ.
MAMA M bụ nwaanyị obiọma. O jighịkwa Baịbụl egwu egwu. Mgbe otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Gertrud Ott ziri ya ozi ọma, o kwetara ka ya na ya mụwa Baịbụl. Nwanna nwaanyị a bụ onye ozi ala ọzọ nke na-eje ozi na Manado. Manado dị n’Ebe Ugwu Sulawesi. Ma, papa m aha ya bụ Erwin gbalịsiri ike ime ka mama m ghara ịbụ Onyeàmà Jehova. Papa m bụ onye ukwu n’ụlọ akụ̀ ọ na-arụ ọrụ, o mechakwara bụrụ onyeisi ụlọ ọrụ na-ere aka òkè na Jakata.
Otu ụbọchị, papa m nyere mama m iwu kpụ ọkụ n’ọnụ.
O ji olu ike gwa ya, sị, “Okpukpe gị na mụnwa họrọ otu.”
Mama m azaghị ya ihe ọ bụla ozugbo, kama, o chebaara ya echiche ma jiri olu ọma gwa ya, sị: “M họọrọ ma di m ma Jehova.”
Ihe a mama m zara papa m enyeghị ya ọnụ okwu. O mekwara ka obi ya jụrụ.
Ka oge na-aga, papa m bịara kwụsịlata inye mama m nsogbu. Ihe kpatara ya bụ na ọ hụrụ mama m n’anya nke ukwuu, o jighịkwa ya egwu egwu n’ihi na ọ bụ nwaanyị ma ihe na onye anya ruru ala.
Ma, mama m chọrọ ka papa m soro ya na-efe Jehova. Mgbe o kpechara ekpere banyere ya, o chetara na papa m na-enwe mmasị ịmụ asụsụ ndị obodo ọzọ. N’ihi ya, ọ na-esi na Baịbụl Bekee depụta ihe ndị dị n’amaokwu Baịbụl ụfọdụ ma mapawa ha n’ebe dị iche iche a ga na-ahụ ha anya. Ọ gwara papa m na ihe mere ya ji mee ya bụ na ya chọrọ ịmụtakwu asụsụ Bekee. Mgbe o chetakwara na papa m na-enwe mmasị ịnọ n’ihu ọtụtụ ndị kwuo okwu, ọ gwara ya ka o nyere ya aka mụgharịa ihe omume e kenyere ya n’Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke. Papa m kwetara. Ebe ọ bụ na papa m na-anabata ndị ọbịa, mama m jụrụ ya ma ọ̀ ga-ekwe ka onye nlekọta sekit nọrọ na nke anyị leta ọgbakọ anyị. Papa m kwetakwara. Mama m ma na papa m ejighị ezinụlọ ya egwu egwu, n’ihi ya, ọ rịọrọ ya ka o soro anyị gaa mgbakọ ukwu. O mekwara otú ahụ.
Otú mama m si nweere papa m ndidi nakwa otú o si jiri amamihe meso ya ihe mere ka papa m jiri nwayọọ nwayọọ gbanwee obi ya. Ka oge na-aga, ezinụlọ anyị kwagara Ịngland. Ọ bụ n’Ịngland ka papa m malitere ịga ọmụmụ ihe, metakwa Nwanna John Barr enyi. Nwanna Barr mechara soro n’Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova. Papa m mekwara baptizim n’otu afọ ahụ. Nke a tọgburu mama m atọgbu. N’afọ ndị na-eso ya, o meere mama m ọtụtụ ihe iji gosi na ọ hụrụ ya n’anya.
Àgwà ọma mama m, otú o si akwanyere ndị mmadụ ùgwù, na otú o si jiri ihe gbasara ofufe Chineke kpọrọ ihe baara ndị niile maara ya uru
Ụfọdụ ndị enyi anyị sịrị na mama m na-eme ka Lidia. Lidia bụ Onye Kraịst e nwere n’oge ndịozi Jizọs. Ọ na-elekwa ndị mmadụ ọbịa. (Ọrụ Ndịozi 16:14, 15) Mụnwa weere mama m ka Sera. Sera ji obi ya niile doo onwe ya n’okpuru di ya bụ́ Ebreham. (1 Pita 3:4-6) Mama m anaghị eme omume rụrụ arụ, ọ na-akwanyere ndị mmadụ ùgwù, jirikwa ofufe Chineke kpọrọ ihe. Àgwà ọma ya baara ndị niile maara ya uru. Ọ bụkwa àgwà ọma ya nyeere papa m aka ịghọ Onyeàmà Jehova. A sị m kwuo, m ga-asị na mama m bụ ezigbo nwa Sera.
mailto:?body=Ezigbo Nwa Sera%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302016014%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ezigbo Nwa Sera